China AH slurry mgbapụta Rubber THROAT BUSH factory na suppliers | YAAO
AH slurry mgbapụta roba impeller
Slurry mgbapụta Expeller Ring
Slurry mgbapụta roba liner
AH slurry mgbapụta Rubber akpịrị BUSH
Mgbapụta slurry akpịrị akpịrị bụ otu n'ime akụkụ mmiri mmiri na-agbapụta slurry pump nke na-eduzi slurries na impeller, ọ bụ ihe ntanetị akụkụ nke na-ejikọ ya na efere mkpuchi.
Akpịrị ohia na-adịkarị na nfuli buru ibu, n'ihi na akpịrị akpịrị na ọnye na-enweghị atụ na-ejikarị otu mpempe siri ike na obere nfuli. Uche nke slurry pump pump bush sitere na ọnụ ahịa dị mma n'ichepụta na ịrụ ọrụ.
Ọtụtụ ndị ọrụ na ndị na-ere ahịa na-eji okwu ahụ bụ 'akpịrị akpịrị' na 'akpịrị akpịrị' na-agbanwe ', ọ bụ nsụgharị ọzọ a na-ahụkarị na nke a nabatara.
A na-ejikarị ahịhịa slurry akpịrị akpịrị na alloy chrome dị elu ma ọ bụ roba eke, ihe ndị pụrụ iche dịkwa.
AH mgbapụta Akpịrị BUSH CODE
* N'ihi na anyị bụ ezigbo onye nrụpụta, anyị nwere ọtụtụ akụkụ mapụtara maka slurry mgbapụta akpịrị
* Slurry mgbapụta Ọdịdị
* YAAO® bụ ụghalaahia edenyere na ọ naghị anọchite ma ọ bụ na ọ nweghị n’ụzọ ọ bụla jikọrọ Warman® nke Weir Minerals Group. A na-eji aha, nọmba, akara na nkọwa niile eme ihe maka naanị nzube ma ọ pụtaghị na nfuli ọ bụla ma ọ bụ akụkụ ndị edepụtara bụ ngwaahịa nke mgbapụta Warman.
* YAAO® pọmpụ akpịrị na-agbanwe naanị na Warman® pump akpu ọhịa.
* Akwụkwọ a bụ ihe onwunwe nke YAAO® Pump ma enweghị ike imegharị ma ọ bụ gosi ya na ndị ọzọ na-enweghị ikike ederede.
Nke gara aga: 8 Afọ ekspootu slurry mgbapụta mapụtara Parts Cover efere - L-Type slurry mgbapụta impeller - YAAO
Osote: Slurry mgbapụta roba liner
SPR slurry mgbapụta Ihapu Pipe
SPR slurry mgbapụta Mepee impeller
SPR slurry mgbapụta casing
SPR slurry mgbapụta Kọlụm
L-Type slurry mgbapụta ụba efere liner